ဒီစာစုလေးက ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်သက်သက်ပါ။ ရိုင်းသွားခဲ့ရင် သို့မဟုတ် အမြင်မကြည်တာ တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးထိပ် ခေါက်ပြီးမှ ကန်တော့လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးပါ။ အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကျွန်တော် အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါတယ်နော်။
ကျွန်တော်အခုတစ်လော အလုပ်မှာစိတ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲ ငြီးငွေ့နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ အ ကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ပြီးတော့မေးမိတယ်။ ငွေကြောင့်လား၊ ဂုဏ်ကြောင့်လား၊ ဒါမှ မဟုတ် ရာထူးကြောင့်လားပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုချင်းစီကို သေချာပြန်ပြီး တွေးကြည့်တော့လည်း တစ်ခု မှ မဟုတ်တော့သလိုပဲ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာကြောင့်အလုပ်မှာ ငြီးငွေ့နေရတာလဲ။
တကယ်တော့ ဒီအလုပ်တွေက ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ ရွေးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု တော့ငြီးငွေ့နေပြီ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကို ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ ငယ်ငယ် တုန်းကရော ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကို ငြီးငွေ့ခဲ့လားလို့ပေါ့။ ကျွန်တော် သတိထားမိတာက ငယ်စဉ်တုန်းက ကစားချိန်လျော့သွားမှာစိုးလို့ စာကျက်ရမှာ၊ စာလုပ်ရမှာကို ကြောက်တာကလွဲရင် စာ ကျက်ရခြင်းအပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော်ငြီးငွေ့ခြင်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စာကြိုးစားလို့ အမှတ်ကောင်းရင်၊ အဆင့်ကောင်းရင် လူတိုင်းက၀ိုင်းပြီးတော့ တော်လိုက်တာလို့ပြောမှာကို ဒီတော့စာ ကျက်ရတာကို ဘယ်ငြီးငွေ့ပါ့မလဲ။
အဲ့လိုစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်သွားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် အ လုပ်မှာ မပျော်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကို တွေ့သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် အလုပ်မှာ မပျော်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ချီးကျူးတာကိုမခံရလို့ဆိုတာကို သိသွားတယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ချီးကျူးတာကို မခံခဲ့ရသလဲ။ တကယ်တော့ လူသားတွေဆိုတာက ချီးကျူးတာ၊ ချီးမွမ်းတာ ကို ခံချင်တဲ့လူတွေပါပဲ။ မခံချင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနည်းစုလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလို အဖြေကိုတွေ့သွားတော့ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ စဉ်းစားတယ်။ ဘာကြောင့် လူကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို မချီးကျူးကြသလဲ။
သူတို့ထက် ဒီနေရာမှတော်ပါလားလို့ သူများတွေ ထင်သွားမှာကို စိုးရိမ်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် အဲ့လိုမျိုးလေး ချီးကျူးတဲ့စကား ပြောလိုက်ရမှာကိုပဲ ၀န်လေးနေကြတာလား။ အမှန်ကိုဆိုရရင် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတာ ငွေကြေးတွေ၊ ဂုဏ်တွေ၊ ရာထူးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်တို့ လေးစား ရတဲ့၊ ကြည်ညိုရတဲ့၊ ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေ ပါးစပ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ တော်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းပါ။
ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လသားအရွယ်ကနေ မတ်တတ်ရပ်နိုင်ခဲ့တာ ရပ်နိုင်ပေ့၊ ရပ်နိုင်ပေ့ လို့ဆိုခဲ့တဲ့ အဖေတွေ၊ အမေတွေရဲ့ချီးကျူးသံတွေကြောင့်ပါ။ ထို့အတူ မူကြိုတွေတက် စာတွေကျက်ပြီး အခုလိုအလုပ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ၀င်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာလဲ ဒီချီးကျူးသံတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကို တော်လိုက်တာလို့ တစ်ခွန်းတည်းသာ ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ပြင် ထားပါ့မယ်။
Hi friend, You are so good at writing.I really like your feelings................
Post comment By phoethar
I agree your feeling!
The things you said is very important for teenage ...,Most of teenage is feeling like this..!me too..., You are always see very important things for our life.!
Nice to read your heart voice and appreciate your opening saying. i believe you are so clever as i can guess as your writing. try your best!!!
Post comment By NN
မိုက်တယ်.... စိတ်ကူးနဲ့ စိတ်ထားကတော့.တော်တော် ကို လေးစားဖိူ့ကောင်းပါတယ်. ဒီလို အမြင်လေးတွေရှိကြလို့ ကောင်းပါတယ်. ။ ကျွန်တော်တို့လို ဗဟုသုတ မရှိသူတွေ အတွက် တော်တော် ကို အားကိုးရတာပေါ့.. ကောင်းပါတယ်.... အခုလို တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ထပ်ရေးနိုင်ပါစေနော်... လေးစားလျက်
Post comment By bunny0165@gmail
Post comment By ထက်ကို FANCYBOY
တော်လိုက်တာလို့ ပြောလိုက်လို့ ဘ၀င်မြင့်မသွားဘို့ဘဲလိုပါတယ် ခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးတော်ကြပါတယ်
Post comment By သိပ်ကောင်းပါတယ်
တခါတလေကိုယ်ခံစားရတာတွေဟာအလကားမဟုတ်ပါဘူး တချိန်ချိန်မှာကိုလူကျော်လဲလူကြီးမဖြစ်လာဘူးလို.ပြောလို.ပြောလို.မရဘူးလေ အဲဒီအချိန်ကျရင် ကိုယ်လက်ငယ်သားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာသိသွားတာပေါ.နော် ဒါလဲအမြတ်ပါပဲလေနော်
Post comment By yoeyoe
စာကျက်ပျင်းသော ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကိုရောပေါ့။ thankamillion for that.
Post comment By evilyouth2009
လူတိုင်းမှာချီးကျုးခံရဖူးသလိုကဲ့ရဲ့မှုကိုလည်းခံဖူးမှာပါ။ ကျွန်မဘ၀မှာတော့ ကဲ့ရဲ့အခံရဆုံးအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၁ခါလောက်လေး ချီးကျုးခံလိုက်ရတာနဲ့လေ အဲဒီလူကဘယ်နှစ်ခါကိုယ့်က်ုကဲ့ရဲ့ဖူးတာကိုလဲမေ့သွားဖူးခဲ့တယ်။ ချီးကျုးခြင်းဟာ တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေရုံသာမက အားအင်တွေကိုပါဖြစ်စေနီင်တာကိုလူကြီးတွေရော လူငယ်တွေပါသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ချီးကျုးစကားလေး၁ခွန်းပြောဖို့ မတွန့်တိုကြပါနဲ့လို့အကြံပြုလျှက်။
This feeling is the same with me.
Post comment By maw
ညီမလည်း ဒီလိုခံစားချက်မျိုးအများကြီးကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်ပါ... လေးစားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကို သတိမထားမိတဲ့အရာတွေကို အစ်ကိုတို့က ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်းအများကြီးရေးနိုင်ပါစေလို့.......။ ညီမမှာလဲခံစားချက်တွေရှိပါတယ် ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်ဝေငှချင်ပါတယ်။ gmail က phochitak7@gmail.com
သိပ်မှန်တာပဲ.... အစကဘာလို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကို ညီးငွေ့သွားပါလိမ့်လို့စဉ်းစားနေတာ။ ဒီစာကိုတွေ့ ပြီးသဘောကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဘာကိုယ်ပဲ ပြောခဲ့တာပါ. ငါတော်သားပဲ ငါလုပ်တာတွေ ကောင်းသားပဲါငါ့မှာအရည်အချင်းတွေရှိသားပဲဆိုပြီး ....တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ကျေးဇူးပါ
Post comment By bigbigbug85
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ Essay တစ်ပုဒ်ပါ...ခံစားချက်ခြင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ အစ်ကို့ကိုကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေ။ ကိုယ်အထက်ကလူ၊ ကိုယ်လေးစား ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေဆီက ချီးကျူးစကားကိုသာကြားရလို့ကတော့ အရာအားလုံး ဟာ လွယ်ကူသွားရစမြဲပဲလေ။ တော်လိုက်တာ...... ကိုယ်က အထက်တစ်နေရာ ကိုရောက်ခဲ့ရင်လည်း ရိုးသားစွာချီးကျူးတတ်သူ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
အလုပ်ကို စွဲလန်း တပ်မက်စွာ လုပ်သူမို့ ဒီ အေ တွးကို အပြည့်အ၀ ‌ထောက်ခံပါတယ် ဒီ Essay ကို ဖတ်လိုက်ရလို့ Thank You
Thanksalot for ur opening saying.................now,i can search me............i also have this opinion
Post comment By Kalay
i like that sentences so nice that is really effecting upon our human mind
Post comment By Dr.Phyuhtwemaung
တော်လိုက်တာ ကောင်လေးရယ်:D တကယ်တော်ပါတယ်။ လာလည်ရင်း ချီးကျူးသွားပါတယ်
Post comment By လသာည
EMMA WATSON KISSING SOMEONE http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4803&page=1&keycode=&keyword= - EMMA WATSON KISSING SOMEONE EMMA WATSON KISSING SOMEONE http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4803&page=1&keycode=&keyword= - EMMA WATSON KISSING SOMEONE INGRID CORONADO DESNUDA http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4804&page=1&keycode=&keyword= - INGRID CORONADO DESNUDA INGRID CORONADO DESNUDA http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4804&page=1&keycode=&keyword= - INGRID CORONADO DESNUDA CELEBRITIES NUDITY FREE http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4805&page=1&keycode=&keyword= - CELEBRITIES NUDITY FREE CELEBRITIES NUDITY FREE http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4805&page=1&keycode=&keyword= - CELEBRITIES NUDITY FREE FREE CELEBRITY ACCIDENTAL NUDITY http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4806&page=1&keycode=&keyword= - FREE CELEBRITY ACCIDENTAL NUDITY FREE CELEBRITY ACCIDENTAL NUDITY http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4806&page=1&keycode=&keyword= - FREE CELEBRITY ACCIDENTAL NUDITY MARIBEL GUARDIA COGIENDO http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4807&page=1&keycode=&keyword= - MARIBEL GUARDIA COGIENDO MARIBEL GUARDIA COGIENDO http://www.fira.net/helpdesk/qna/read_ok.php?indexnum=4807&page=1&keycode=&keyword= - MARIBEL GUARDIA COGIENDO
Post comment By MESSAGE
MUJERES HERMOSAS DESNUDAS http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4857&page=1&keycode=&keyword=MUJERES%20HERMOSAS%20DESNUDAS - MUJERES HERMOSAS DESNUDAS MUJERES HERMOSAS DESNUDAS http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4857&page=1&keycode=&keyword=MUJERES%20HERMOSAS%20DESNUDAS - MUJERES HERMOSAS DESNUDAS PANTYHOSE CELEBRITIES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4858&page=1&keycode=&keyword=PANTYHOSE%20CELEBRITIES - PANTYHOSE CELEBRITIES PANTYHOSE CELEBRITIES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4858&page=1&keycode=&keyword=PANTYHOSE%20CELEBRITIES - PANTYHOSE CELEBRITIES ODALYS GARCIA DESNUDA http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4859&page=1&keycode=&keyword=ODALYS%20GARCIA%20DESNUDA - ODALYS GARCIA DESNUDA ODALYS GARCIA DESNUDA http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4859&page=1&keycode=&keyword=ODALYS%20GARCIA%20DESNUDA - ODALYS GARCIA DESNUDA ANOREXIC CELEBRITIES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4860&page=1&keycode=&keyword=ANOREXIC%20CELEBRITIES - ANOREXIC CELEBRITIES ANOREXIC CELEBRITIES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4860&page=1&keycode=&keyword=ANOREXIC%20CELEBRITIES - ANOREXIC CELEBRITIES CELEBRITY TOES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4861&page=1&keycode=&keyword=CELEBRITY%20TOES - CELEBRITY TOES CELEBRITY TOES http://www.fira.net/helpdesk/qna/read.html?indexnum=4861&page=1&keycode=&keyword=CELEBRITY%20TOES - CELEBRITY TOES